Faransiiska oo baaritaan ku samaynaya 12 Milyan oo Fayl oo dhanka kubadda cagta iyo fadeexado laga cabsi qabo – Gool FM
(Paris) 19 Feb 2019. Xeer ilaaliyaha maaliyadda Faransiiska ayaa daaha ka rogay in baaritaan lagu samaynayo 12 milyan oo fayl oo dhanka Kubadda cagta ah, kaddib markii ay soo bexeen warar sir ah oo la helay oo tilmaamaya in fadeexado iyo wax si xun u maareyn dhanka kubadda cagta ah ay jiraan.
Garsoorka Faransiiska ayaa maanta oo Talaado ah ku dhawaaqay in ay si dhab ah u baarayaan warbixintii sirta ahaa ee uu soo gudbiyay Rui Pinto (John) oo Bortuqiis ah, bishii December 2016, waxaana warbixintu sheegeysay in ay jiaan musuq maasuq, lacago si sharci darro ah lagu kala qaatay iyo dembiyo culus oo kubadda cagta ah.
Kaddib ayaa waxaa misna soo baxay maqaalo badan oo farta ku fiiqayay kooxaha AS Monaco iyo Paris Saint-Germain ee Faransiiska dhammaadkii 2018.
“Xiriirrada garsoorka kubadda cagta ayaa haatan kulan yeeshay waddanka Holland,iyagoo macluumaadka is dhaafsanayay isla markaana wada shaqeynaya, waxaana kulankaa ka qab galay xeer ilaaliyaha guud ee Faransiiska Jean-Yves Lourgouiloux iyo Eric Russo oo ka socday dhanka maaliyadda.
Rui Pinto oo 30 jir ah ayaa soo gudbiyay 70 milyan oo Fayl oo musuq maasuq iyo waxyaabo daaha gadaashiisa ah oo dhanka kubadda cagta ah, waxaana uu macluumaadkaas oo dhamaa 3.4 terabytes (Tb) uu ku wareejiyay wargeyska ‘Der Spiegel’ ee Isboortiga ka faallooda ee waddanka Jarmalka, kaasoo isna la wadaagay dhowr warbaahin oo Yurub leedahay sida Mediapart oo Faransiiska ah.
Wiilkaasi ayaa 16-kii Janaayo lagu xiray caasimadda Hungry ee Budapest, waxaana loo tarxiilayaa Bortuqiiska oo ah dalka uu u dhashay, halkaas oo isna lagu soo oogay inuu macluumaad gudbiyay si uu lacag ugu helo, xatooyo dhanka macluumaadka ah, ku xad gudubka sirta ah iyo inuu gudbiyay macluumaad been abuur ah.